Ingabe amadeski okuhamba ngebhayisikili akulungele? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > I-Bike desk vs treadmill desk - unganquma kanjani
I-Bike desk vs treadmill desk - unganquma kanjani
Ingabe amadeski okuhamba ngebhayisikili akulungele?
Kodwa isinyatheloamatafulafuthi yenza okungaphezu kosizo njewenangokuvivinya umzimba ngokuvivinya umzimba, ngokusho kocwaningo olusha lomshayeli olukhishwe ngoMsombuluko. Ithole ukunyathela ngaphansi kwe-ideskiinkuluimpiloizinzuzo, kufaka phakathi ukuvimbela ukukhuluphala, isifo sikashukela nesifo senhliziyo ngokusebenzisa ukumelana ne-insulin.13 uNovemba. Okthoba 2018
Ngicabanga ukuthi sonke singasho ukuthi sibheke kumshayeli okhokhelwayo phambilini, noma ngabe bekungumshayeli wakho omthandayo osakhula noma uhambo lwakho lomhlaba wonke oluthandayo, umshayeli ophuphe ukuthi ungaba noma ulingise amabhayisikili eqembu, kodwa kufanele yeka ngaphambi kokuthi uphume isiqu sakho futhi ushintshe umqondo weketanga? Yingakho kungafanele usethe ibhayisikili lakho njengabagibeli bePro Pro abachitha cishe zonke izinsuku ebhayisekilini labo futhi uma bengekho ebhayisikilini labo kukhona ukuqeqeshwa Okufanele ukuqagele emasondweni aboUsebenza amahora amaningi ukuze uguquguquke ngangokunokwenzeka ukuze bakwazi ukubamba indawo ye-aerodynamic kakhuluUbude bomjaho wabo, lokho kusho ukuthi bangakwazi ukugibela iziqu ezinde futhi bazicindezele bajule ngangokunokwenzeka endaweni enobudlova kakhuluIyoga, Ukwehlisa nokwelula imisipha nesikhathi esiningi ebhayisikili kwenza konke umgibeli olungele ukuchitha isikhathi eside kulesi sikhundla esinolaka umshayeli ojwayelekile onjengami noma ungeke ukwazi ukuhlala amamayela amahlanu kule ndawo ngaphandle kokuzizwa ungakhululekile kakhulu futhi mhlawumbe uzilimaze Iningi lethu lijwayele ukuhlala endaweni yethu amadeski, ukusebenza noma ukwenza ukuhamba futhi ume kakhulu, ungagobeli phezu kwezibambo. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi kufanele sishiye lezi zikhundla ezinolaka olukhulu. Abagibeli beTella ProsPro baneqembu lonke lomakhenikha abanakekela amabhayisikili abo, nemishini yakamuva ngobukhulu ongabucabanga.
Imvamisa zizoshintsha izinto ngokuya ngesigaba somjaho wazo futhi zikhathazeke kakhulu ngokugiya namasondo. Ngoba ubona umgibeli wakho omthandayo enonyaka onzima impela ene-gearing eqinile futhi ipuleti elikhulu ngaphambili akusho ukuthi Kufanele uqeqeshe laba bashayeli usuku nosuku ngalezi zilinganiso zamagiya ezeqile ukuze usheshe ngangokunokwenzeka Ukusethwa kanjena bekungeke kulungele ama-99% ethu abashayeli abajwayelekile futhi nakanjani kuzokusiza ukuthola ukuthi yini okukusebenzela kangcono.
Uma uhlala endaweni eyisicaba, la mapaseji amakhulu kufanele asetshenziswe. Kepha uma uhlala ezintabeni njengami, uyayidinga le khithi ehlanganisiwe. I-UCI inamathela kuzo zonke izinto ezisetshenziswa ngongoti futhi edinga ukuvulelwa umphakathi jikelele akusho ukuthi kufanele sisheshe futhi siyithengePro emabhayisikili ukuthola inzuzo encane phezu komjaho noma isigaba esisodwa, akuzona ezenzelwe yona shayelwa iminyaka imvula noma ikhanye futhi igcinwe egalaji ngonyaka olandelayo.
Umgundi wotshani. Hhayi cha. Cha, hhayi ukusho ukuthi bebengeke baphakamise uma ubanakekela, izinto zesimanje zesayensi zenze izimangaliso njenge-carbon fiber, kepha uma uvele ukhuphukele endaweni yangakini noma ubakhiyele umenzi wobubi noma ubashiye eshedeni, wena cabanga ngokuthi ungacasulwa kanjani uma umshini wokugunda utshani ukhipha kancane kubhubhu ephezulu, yize kunakho konke ukuqeqeshwa kwethu, izinzuzo zisadinga ukunakekelwa ngemuva komjaho futhi angingabazi ukuthi unomsizi wesikhathi esigcwele odlula kubo bonke labo izindawo eziqinile Emva kokukwenza kahle, ufuna ibhayisikili? Ungavele ugxume ugibele ngaphandle kokukhathazeka.
Kwabachwepheshe, induduzo yinto ehamba phambili. Umsebenzi wabo ukugibela amabhayisikili abo bese belulama ekugibeleni ibhayisikili40 Abanawo umsebenzi wesishiyagalolunye kuya kwemihlanu ngenkathi bezilolonga futhi bephumule futhi belungiselela usuku olulandelayo lokuqeqeshwa, sihlala emadeskini ethu futhi sibuyele emuva ngesiqalekiso esibuhlungu iqiniso lokuthi sithathe lesi simo esibi kakhulu, iningi le-peloton pro lizosebenzisa amathayi we-tubular alula alungele ukwehlisa ukucasuka kokumelana nokugudluka futhi mahle ngoba uyakwazi ukugibela izingcindezi zamathayi aphansi ukuze ubambe kakhudlwana futhi zikulungele ukunciphisa ukumelana nokubhoboza lapho i-pro ibhoboza imoto yeqembu labo ayikude ngemuva kwesondo eliyisipele ushintsho olusheshayo emhlane wakho kumathayi we-tubular anamathiselwe ngemuva komphetho futhi uma udinga ukushintsha elinye lawo emgwaqeni, kungcono kuhle njengokungenakwenzeka Ucabanga ukuthi ushintsho lwepayipi emakhazeni aqandayo kubi Ngempela? Uma uthola isondo elibhoboziwe emgwaqeni ibanga elide ukusuka ekhaya cishe ukuphela kohambo lwakho. Uma ungenayo inhlanhla eyanele yokuba nengxenye yakho ngemuva kwakho njengemoto yeqembu, nakanjani ngingahlala nayo ngemuva kokuba semgwaqweni isikhathi esiningiYebo, ukuzwile lokho kulungile.
Ama-Mudguards Ngeke ubambe abagibeli begada abagcwele ngokugcwele esigabeni esimanzi seTour de France Ukumanzi intengo encane ukukhokhela umcibisholo nobunzima besisindo sabalindi bodaka. Kodwa-ke, uma ufuna ukumenyelwa emuva ekusebenzeni kweklabhu yangakini, ngingahle ngincomele ukwenza ngezifiso ingqungquthela ukuze ivumelane nebhayisikili lakho. Ngeke ube sezincwadini ezinhle zanoma ngubani uma uqhubeka uzifaka ngesifutho kumatayi akho, futhi hhayi nje ukuthi uma umanzi, uzohlala umanzi lonke uhambo lwakho, abakwa-fenders bangakusindisa wena nabagibeli bakho uhambo olubuhlungu.
Futhi yebo, ngiyazi uma kuneseluleko, akuningi ongakwenza ukuze uhlale womile, kepha uma ushayele emigwaqeni emanzi uyazi ukuthi isibumbu nezinyawo ezimanzi zingakonakalisa kanjani ngokushesha ukuhamba kwakho, yebo, izinzuzo ziyabona kuhle kakhulu nokuthi ngubani ongafuni Ukujabulisa abangani bakho ngokuthi bavumelana nezimo kangakanani, kodwa ake sicabange ngemiphumela, sigibela amabhayisikili ethu ukuze sijabule, ukuze singashenwa izinsuku, ashiye lo msebenzi ukusetha kubo Izinzuzo futhi nje ukujabulela ukugibela amabhayisikili ethu sikujabulele lesi sihloko futhi usazise uma kukhona esikuphuthele ndawo endaweni yokuphawula engezansi
Ingabe amatafula okunyathelisa ayasebenza?
Futhi kunezifundo ezimbalwa ezimbalwa eziphakamisa inzuzo ethile. Olunye ucwaningo, oluholwa nguDkt.James Levine, isazi se-endocrinologist esikhungweni seMayo Clinic eScottsdale, e-Ariz., Sathola ukuthi esikhathini esiyizinyanga eziyi-12 ababambiqhaza besebenzisaamatafula wokunyathelisabandise umsebenzi wabo wansuku zonke futhi bancipha.Mar 30 2015
Njengoba ukwazi ukubona, ngikhuluma nani bafana kusuka etafuleni lami elisha lokunyathelisa engililethe emasontweni ambalwa edlule.
Abaningi benu bayibonile ezinkundleni zokuxhumana, ku-Snapchat, naku-Instagram lapho ngiqala ukuthola ideski lokunyathela, futhi bengilisebenzisa nsuku zonke kusukela lapho. Bengifuna ukulinda isikhashana ngaphambi kokurekhoda le ndatshana bese ngiyabelana nani bafana ngoba bengifuna ukuqinisekisa ukuthi ngiyayihlola futhi ngiyenze ingxenye yempilo yami kuqala. Ngingahlanganyela nawe izinzuzo, ukuthi kuthuthukise kanjani ukukhiqiza kwami ​​nebhizinisi, ukuthi kuyithuthukise kanjani impilo yami, nokuthi kufanele yini ukutshala imali ukuze usebenze online.
Ngenza ibhizinisi online, futhi uma usebenza online lapho usebenza ekhaya, enye yezinselelo ezinkulu ukuhlala kakhulu. Ngingumfana olingana kahle. Ngiziqeqesha nsuku zonke.
Ngibambe iqhaza emincintiswaneni yokuzivocavoca umzimba, kepha okungikhuthaze kakhulu ukuthi ngitshale imali etafuleni lokunyathela empeleni bekuyincwadi. Incwadi ibizwa ngokuthi yi-Stand Up. Ibizwa ngokuthi Vuka!: Okwenza uSihlalo Wakho Akubulale nokuthi Yini Ongayenza Ngayo.
Le ncwadi, ngizoyinika igama lomlobi, kepha mhlawumbe nginesixhumanisi sayo kwenye indawo esihlokweni. Incwadi ingikhuthaze impela ngoba empeleni bekungulo sosayensi, lo mcwaningi owenza lonke lolu cwaningo lokuthi ukuhlala phansi kubangela kanjani izinkinga eziningi zempilo. Kwangishaya impela.
Eqinisweni, encwadini umbhali wenza izimangalo eziningi ezinesibindi. Enye yazo ukuthi ngehora ngalinye ohlala kulo, unqume amahora amabili wempilo yakho. Isimangalo esinesibindi.
Uthi futhi ukuhlala phansi empeleni kubi kakhulu kuwe kunokubhema, futhi unalo lonke ucwaningo lokukusekela lokho. Empeleni, okokuqala kule ncwadi utshela ukuthi akekho noyedwa owamkholwa ngenkathi enza lolu cwaningo. Kuyamangaza nje ukuthi bangaki abantu ababephikisana nalo.
Ucwaningo oluningi ludinga ukwenziwa manje ukufakazela nokuxhasa imibono yakhe nocwaningo ukuthi manje sekunezinto ezinjengamatafula wokunyathela akhona, noma amadeski amile, futhi kunezindlela eziningi ezahlukahlukene. Ngincoma ngokuqinile ukuthi ufunde le ncwadi. Empeleni uya kuwo wonke umlando wesitulo, nokuthi isihlalo nokuhlala kwakuyinto eyethulwa njengengxenye yempilo yethu yansuku zonke kunguquko yezimboni ngoba inguquko yezimboni kwakuyisikhathi lapho saqala ukusebenzisa imishini.
Kunomsebenzi omncane kakhulu womzimba ngakho-ke abantu manje bahlala kakhulu kunokwenza umsebenzi omningi womzimba. Kwathi lapho uThomas Edison ngiyaxolisa, hhayi uThom, uHenry Ford, nomkhakha wezimoto, ukuthi lokho kwashintsha kanjani izinto.
Ngoba-ke kungazelelwe abantu bebehleli kwezokuthutha esikhundleni sokuhamba nokunyakaza ukuze basuke ku-A baye ku-Z. Njengayo yonke inguquko yamakhompiyutha ngawo-1980 nge-Apple ne-Microsoft ne-IBM nakho konke lokho, ukuthi lokho kugudluzele kanjani izinto phambili ngoba manje abantu bangazelelwe uhleli ngemuva kwekhompyutha. Kwakujabulisa nje impela ukuzwa indaba nendaba yayo.
Into eyodwa futhi ayishoyo encwadini ifana nokuthi
Sihlala e-United States nase Canada, eNyakatho Melika, iningi lomhlaba. Ukukhuluphala kuyinkinga enkulu kangaka. E-United States namuhla, ama-70% aseMelika akhuluphele.
Kuyahlanya lokho. Esinye sezizathu ezinkulu zalokhu ukungabi nokuzivocavoca umzimba, ngoba abantu abadalelwanga ukuhlala usuku lonke. Abantu badalelwa ukuphuma, bazingele futhi baqoqe, futhi basebenze futhi bazulazule.
Siphila ngale ndlela yokuphila thina njengabantu nje esingadalelwanga yona. Asenzelwe ukuhlala emsebenzini amahora nsuku zonke. Asidalelwanga ukuthi sihlale phambi kwe-TV noma sidlale imidlalo yama-athikili amahora emini.
Usho nokuthi ihora elilodwa lokuzivocavoca ngosuku alanele. Akwanele. Wenze ucwaningo oluningi lokuthi isifo sikashukela sihlobene kanjani nokuhlala ngoba enye yezinto ezimbi kakhulu okufanele uzenze uma udla.
Enye yezinto ezimbi kakhulu ongazenza ukuhlala ngesikhathi nangemva kokudla kwakho. Ngoba uma udla ukudla, amanyikwe akho akhipha i-insulin, ushukela wakho wegazi uyakhuphuka, futhi okwenzekayo i-glucose ingena emisipheni ukuze ube namandla ngokushesha. Ngemuva kwalokho noma ikuphi okweqile kugcinwa njengamafutha.
Ukuzivocavoca umzimba nje emini, futhi ikakhulukazi ngemuva kokudla, kuzonciphisa lelo zinga likashukela egazini, futhi kunezinzuzo eziningi kakhulu. Ngincoma ngokuqinile ukufunda le ncwadi, kepha ngizokutshela okuncane ngalesi treadmill, ukuthi kungani ngithenge lokhu, yini engazuza kulokho engikutholile. Ngenze ucwaningo oluncane ngathola ukuthi i-LifeSpan Fitness ingenye yezimpawu ezinhle kakhulu zamadeski wokunyathelisa.
Ngenze ucwaningo lapha eVancouver, eCanada lapho ngihlala khona futhi azikho izindawo eziningi ezithengisa endaweni yangakini. Kukhona oyedwa ngaphandle othengisa leli deski kepha bacele imali engenangqondo ngalo. Empeleni nginqume ukuyithenga online.
Ngayithenga ngqo kusuka kuwebhusayithi yabo futhi babe nokuthunyelwa kwamahhala e-United States naseCanada futhi bakuthumela ngezinsuku ezimbalwa noma ngaphezulu. Kwenzeke ngokushesha okukhulu. Lena
Kunamamodeli ahlukile. Ngizoba nesixhumanisi encazelweni yemodeli enginayo. Le modeli ine-treadmill futhi inedeski futhi ideski likwazi ukuguquguquka ukuphakama ngobuchwepheshe.
waba yini umphumela wokukhathala kwemisipha emandleni akho
Isibonelo, ngiyakwazi ukuhambisa leli deski bese ngilivala. Ngiyakwazi ukukuletha. Empeleni, ngikhokhe imali ethe xaxa ngalesi sici, kepha uma usisebenzisa etafuleni lokunyathela futhi ulisebenzisa nsuku zonke, akudingeki usebenzise imali ethe xaxa kulesi sici esishintshekayo.
Ngoba kimi, ngihlala ngiyigcina ezingeni elifanayo. Kungasiza ukuba nalezi zinto ze-elekthronikhi uma uhlela ukuma bese uziguqula zizihlalele, kepha nginedeski elihlukile engingahlala kulo. Kimi bekungenasidingo, kupholile ukuba nakho.
Lena, iya noma yikuphi ukusuka
Njengamanje ngise-mile ngehora, futhi ingahamba iye phansi ibe ngu- .4 mph. Lokho kungu-0.4 mph lapha.
Awukuqapheli neze. Ngingakhuphukela ku-4 mph, empeleni okufana nokugijima okuncane, futhi ngizokukhombisa abafana abashesha impela. Lokho ngamamayela ama-4 ngehora.
Kufanele ngigijime kancane. Uyazi yini? Akuthathanga sikhathi ukujwayela ngoba njengabantu abaningi into eyodwa abantu abanayo ukuthi lapho ngithola lokhu, kuba nzima kimi ukusebenza.
Okuhlukile kunjalo. Engikutholile ukuthi ngibe nomkhiqizo omkhulu ngoba uma unyakaza ngempela futhi uphefumula, uthatha umoya-mpilo omningi. Okwenzekayo ukuthi kusebenze izingxenye ezahlukahlukene zobuchopho bakho.
Uzizwa uqaphile ngokwengeziwe, uzizwa ugxile kakhudlwana, uzizwa unamandla amakhulu. Okuhlangenwe nakho kwami ​​ukuthi ngizizwa ngisebenza kangcono emsebenzini. Lapha, ngemayela elilodwa ngehora, uma lokho kukuningi kuwe, ungahlala wehlise ijubane uye ku-0.4 mph futhi wenze umsebenzi wakho ungawuboni nakancane.
Kufana nokuthatha isinyathelo njalo ngomzuzwana noma emibili. Ngithole ukuthi ushintsho kulokhu belulula kakhulu, lushesha kakhulu. Njengoba ngishilo, iguqule amandla ami kakhulu ngokuhamba kosuku.
Ngicabanga ukuthi lapho uhleli empeleni ukhathala ngokwengeziwe. Angiqiniseki ukuthi uyakwazi yini lokhu, kepha uma uke wahlala emsebenzini, imvamisa uzobe uvilapha. Kubi ngokuma kwakho futhi ungakhathala.
Kimi ngithanda ukuhambisa. Uma ngikhuluma nocingo, ngithanda ukuhamba nokunyakaza ngoba ngizizwa ngingcono. Kuyafana nalapho ngisebenza.
Ngikwazile ukwenza zonke izinhlobo zomsebenzi ngale ndlela, imvamisa futhi futhi cishe imayela ngehora. Ngiyakwazi ukubhala, ngingabhala iposi lebhulogi, ngikwazi ukubhala ama-imeyili ami. Manje ngenza izingcingo eziningi ze-Skype nama-webinars nokunye okunjalo ngenkathi ngisebenza.
Into emnandi ngaleli tafula lokunyathela ukuthi lapha lingitshela ukuthi ngigijime isikhathi esingakanani, ibanga eliphelele engiligijimile, inani lezinyathelo, inani eliphelele lama-calories engiwashisile. Ingonga futhi yonke into nge-bluetooth. Ngingagcina yonke into efonini yami.
Kupholile impela ngoba ngihamba amahora amaningana nsuku zonke. Ngenxa yalokho, njengoba ngishilo, ngizizwa ngingcono. Futhi, umzimba wami usushintshile ngoba ngishisa amakhalori amaningi kakhulu.
Ngiyancipha. Ngibona sengathi ngisebenza ngezinto eziningi ngoba ngenza ezemidlalo ngenkathi ngakha ibhizinisi lami. Kuyinto enhle kakhulu.
Kungumuzwa omuhle kakhulu. Ngihlala ngikholelwa ukuthi izimali ezinhle kakhulu ongazenza ngokusobala zihlala kuwe, kepha ikakhulu ezintweni ozisebenzisa nsuku zonke. Ukutshalwa kwezimali okuhle kakhulu engake ngakwenza empilweni yami kube ngumshini wami wamanzi, i-ionizer yami yamanzi ngoba ngiphuza amathani amanzi nsuku zonke.
Lezi zinto ezishintsha zonke izinsuku ezincane, lezi zinto ezincane lapho ziba yingxenye yempilo yakho, impilo yakho, amandla akho, konke. Nginezihlungi zeshawa, isihlungi esikhethekile seshawa. Kufanele ugeze nsuku zonke.
Ihlunga yonke i-chlorine, zonke izinsimbi. Uma amanzi eguqukela enanini elithile le-pH, lilungele isikhumba. Ngenye yezimali ezinhle kakhulu ezake zenziwa.
Lesi futhi kungenzeka ukuthi siphezulu esisodwa noma ezimbili ngoba ngibona isikhathi engisichitha ngihlezi usuku ngalunye. Ngenxa yalokhu, sekushintshe konke kimi emavikini ambalwa edlule futhi kuzoqhubeka nokushintsha impilo yami yonke. Kuyabiza kancane, kepha empeleni akukubi kangako.
Le bekungukuthi, ngicabanga, $ 1,700, futhi ungayithola nge
Ngicabanga ukuthi ungaba ne- $ 1,500, kepha ndoda, leyo yinani elincane kakhulu lokukhokhela okuthile okwenza umthelela omkhulu empilweni yakho. Ukutshala imali entweni enjengale kunikezwe kimi ngoba uma uyifundile le ncwadi ngqo, angazi ukuthi ungaqhubeka kanjani nokuhlala uma usuwazi ucwaningo nolwazi kanye nemiphumela yalo. Manje njengoba senginakho lokhu futhi ngikusebenzisa nsuku zonke kuyabheda ukuhlala phansi.
Uyazo ukuthi ngisho ukuthini? Uma wake waba nokuhlangenwe nakho kokuthi uthuthukise indlela yakho yokuphila ngandlela thile bese kufanele ubuyele emuva, ngeke kuphinde. Kufana nokuba nomakhalekhukhwini, kumane kungamukeleki ukungabi nawo umakhalekhukhwini ngoba manje usujwayele zonke izinzuzo zeselula. Kimi kwaba utshalomali olungakholeki.
Ngiyayithanda. Ikulolonge ngempela impilo yami futhi yenza umehluko impela. Yebo bafo kunjalo.
Leli yizinga elilandelayo maqondana nokwenza impilo yakho isebenze kangcono, futhi ikakhulukazi uma usesikhundleni esifana nami. Uma ungathanda ukufunda okwengeziwe ngayo, nginesixhumanisi semodeli ethile enginayo encazelweni engezansi. Ngizoyithola kokuthunyelwe kwebhulogi nakho konke, kepha ngiyincoma kakhulu bantu.
Njengoba ngishilo, ngiyisebenzisa nsuku zonke. Kuyingxenye yempilo yami manje. Kuhle.
Ngiyayithanda. Kuyinto engingeke ngiphile ngaphandle kwayo. Bheka abafana.
Sincoma. Ncoma kakhulu i-LifeSpan. Ziyamangalisa.
Ngenze ucwaningo oluningi ngakho konke ngakho. Inkampani enhle impela. Ukuxhumana okuhle.
Ngikholwa ukuthi nabo banesiqinisekiso nokunye okunjalo. Yebo, ungazi-oda kahle online. Ukuthumela kwamahhala.
Konke kuhle. Ngiyabonga bafana ngokubuka le ndatshana. Qiniseka ukuthi ushaya inkinobho yokuthanda uma ukuthandile lokho.
Qiniseka ukuthi ubhalisela ama-athikili amaningi bese ushiya amazwana. Ngiyathanda ukuzwa ukuthi nina nicabangani. Zinakekele.
Ingabe imijikelezo yedeski isebenza ngempela?
Ukuhamba ngomsebenzi kungenzeka kungathintiSebenzaIkhwalithi noma Ukukhiqiza. Amavolontiya athe umshini wokugebheza awunamthelela ekukhiqizeni kwawo noma ezingeni lawosebenza. Ababhali bathi imizuzu engama-23 nje kuphela yokwehlwaya usuku kungathuthukisa impilo yabantu abafanayoideskiimisebenzi -bound.Februwari 14 2011
Sanibonani nonke, nguDoctor Jo futhi sekuyisikhathi sokubuyekezwa komkhiqizo futhi. Abantu baseCubii bangithumelela umqeqeshi wabo omuhle oyindilinga ngaphansi kwedeski. Ake siqale, yini eyenza lo mqeqeshi we-elliptical aphole kangaka? Kuwukuhlakanipha! Ungayixhuma efonini yakho nge-bluetooth futhi inohlelo lokusebenza.
Lokhu kumnandi kakhulu ngoba ungazikala ulinganise abangane bakho noma osebenza nabo, futhi uma ufana nami, ukuncintisana nje okuncane, kukukhuthaza ukuthi usebenze usuku lonke. Ngisithanda kakhulu lesi sihlanganisi, ngizoqala ukuhamba, njengoba ubona, amadolo ami awaphakeme kakhulu. Futhi leyo yinto enhle, ngoba uma ngisebenza edeskini usuku lonke, uma nginokuthile okufana nesitebhisi noma ibhayisikili elidonsa amadolo ami phezulu, ngizoshayeka phezulu kwedeski.
Lokho kwenza kube kuhle impela ngoba akudingeki ulungise noma yini. Ngoba njengoba sazi, uma usebenza edeskini, ufuna ukuphakama kwedeski kudlule ukuphakama okuthile ukuze ube nokuma okuhle. Ngakho-ke akudingeki ushintshe noma yini.
Ungayibeka nje ngaphansi kwedesksi lakho. Kubuye kube kuhle kakhulu ngoba inezilungiselelo eziyi-8 zokumelana ezihlukile. Ngakho-ke ungaqala kanzima ekuqaleni kosuku uma ufuna, bese mhlawumbe uliphule kancane noma wakhe kulo.
Kuhle impela kanjalo. Kubushelelezi kakhulu. Akuyona into engahambi kahle, ngakho-ke awuzizwa sengathi ucindezela umzimba wakho noma uhlanganisa umzimba wakho ngezindlela ezahlukahlukene zokuwushukumisela ukuze ube nokuma okuhle kakhulu ngenkathi uzivocavoca.
Ungafaka futhi unyawo lwakho ezindaweni ezahlukahlukene futhi usebenzise imisipha ehlukene emlenzeni. Ngakho-ke uma uphakeme uzosebenzisa izithende zakho kancane, futhi uma uqhubekela phambili uzosebenzisa izinzwane zakho kakhudlwana ngoba yindlela ocindezela ngayo. Ngakho-ke futhi ungakuguqula emini.
Noma ungaba nayo phakathi bese wenza okuncane kwakho kokubili. Futhi ungabuyela emuva ngokunye ukuzivocavoca. Ngakho-ke lokhu kuyinkinga ethile kwabanye abantu, kepha uhambisa leyo misipha ngendlela ehlukile futhi uyiqeqeshe ngenye indlela.
Ngakho-ke ungakwenza nganoma iyiphi indlela. Ngiyayizwa le misipha ifudumala kancane, ngakho-ke ngiyazi impela ukuthi ngiyazivocavoca futhi ngenza okuthile. Uhlelo lokusebenza enalo likuvumela ukuthi uphonse inselelo kubangani bakho, kepha noma ngabe lwenzelani lokho, ligcina umkhondo wama-calories, izinyathelo, amamayela nesikhathi sakho.
Futhi phezulu lapha kukhona nebhethri, elikukhombisa ukuthi unamashaji angakanani ku-bluetooth yakho. Futhi inentambo ngakho-ke uvele uyixhume odongeni lapho udinga ukuyifaka kabusha, kepha bengiyisebenzisa isikhashana futhi ayikaze yehle kakhulu ngakho-ke kuhle, icabanga ukuthi iyiqiniso isikhathi eside. Bese usho nje lapha ukuthi ukumiphi ukumelana okuso.
Ngakho-ke njengamanje ngenza nje okungu-2 okuncane, akukho okukhulu kakhulu, kepha ungakuguqula ngendlela othanda ngayo ngakho kukugcina kukulandela ngomkhondo. Engikuthandayo lapha phansi ukuthi akusindi kangako, usengayicosha ngesandla esisodwa, kepha inesisindo esanele ukuthi ayishelelezi nxazonke. Futhi lokho kuhle impela ngoba awufuni ukukhathazeka ngokuyislayida ngendlela ethile ukuze ingashibiliki.
Uma usuyibekile phansi, izohlala endaweni eyodwa. Yayiyinhle impela nayo ngoba uma ingena ebhokisini konke okumele ukwenze ukufaka umthengisi futhi kwangithatha ngaphansi kwemizuzu engu-5 ukuyifaka, futhi ize ne-screwdriver nezikulufo zayo ukuze ungafaki dinga noma yini eyengeziwe Yiba nemishini yokuyihlanganisa. Kuza futhi nalezi zinto ezicoceke kahle ngoba uzibeka ngaphansi kwamasondo uma unamasondo esihlalweni sakho bese isihlalo sakho singasheleleki uma uphinde washibilika kuso.
Ngakho-ke bacabanga ngakho konke. Kuhle impela ukuba nakho konke okudingayo ebhokisini elilodwa. Njengoba ukwazi ukubona lapha, ushintsha ukumelana lapha ngakho-ke vele ukukusonte.
Lokho kungu-1 bese kusuka ku-2 kuye ku-8. Ngakho-ke kulula kakhulu ukushintsha lokhu kumelana. Ngakho-ke lokhu akuyona nje eyokuzivocavoca okujwayelekile.
Kuhle ukuzivocavoca okujwayelekile, kepha futhi ngiyakuthanda kakhulu ngoba kuhle ukwelashwa. Ukubushelelezi kokuhamba kuhle impela, ake sithi uhlinziwe, uhlinzwe edolweni, wahlinzwa neqakala, wahlinzwa inqulu. Lokhu kuhamba okuhle okushelelayo ukuze uhambe.
Ake sithi awukakulungeli ukwenza izivivinyo ezinkulu zokuma. Ngivame ukuzwa iziguli zithi, awu, kuba buhlungu lapho ngisukuma ukuze nginyakaze. Kuhle lokho ngoba usengakwazi ukuzivocavoca umzimba, ukuzivocavoca nokunyakaza okudingayo, kepha ungahlala nje esihlalweni, uhlale kusofa wakho wenze lokhu futhi uthola ukuzivocavoca okuhle lapha.
Uyabona nje ngithola lesi sikwele, ngithola lokho kunyakaza ezinqulwini zami, lokho kuhamba ngikuthole emaqakaleni ami. Ngakho-ke futhi kuyindlela enhle yokwelapha, hhayi nje ukuzivocavoca okujwayelekile. Ungenza noma yini ngayo.
Futhi nonke nina mazambane osofa laphaya, anisenazo izaba. Ungabeka lokhu eceleni kombhede wakho bese ubuka i-TV uma ufuna, ngakho-ke ngeke ungitshele ukuthi awufuni ukwenza lutho ngoba awufuni ukwehla kusofa ngoba manje usungazivocavoca ngenkathi esofeni. Uma unemibuzo, sicela ubashiye esigabeni sokuphawula.
Uma ufuna ukufunda kabanzi ngomkhiqizo, ungavakashela i-mycubii.com. Uma ufuna ukuthenga umkhiqizo, ungavakashela i-AskDoctorJo.com/cubii ngo-2 'i'.
Ngakho khumbula, qiniseka, ujabule futhi ngiyethemba uzolulama kungekudala.
Ngabe unganciphisa isisindo ngamabhayisikili aphansi kwedeski?
Izindaba ezinhle kunazo zonke kulabo abafunaukuncipha emsimbeni,ngaphansi-ideskiabagibeli bamabhayisikili bashisa ama-calories angu-107 engeziwe usuku ngalunye, okufaka ngaphezu kwama-calories angu-500 ngesonto. Kunjaloungaseukuhamba ngezinyawo isikhathi eside kunemizuzu engama-50 ngosuku abahlanganyeli besifundo abakwenzileuma ungifuna ukugoqa iukuncipha komzimba.
(umculo othambile) - Heyi bafo, nguDkt Tess. Asikho, nanini, nanini, akukho sizathu sokungazivocavoci umzimba.
Kulungile, njengoba ubona, ngabe ngisehhotela ngoba nginemithi yokuhamba futhi angisoze? Ungakhethi amakhethini anjalo. Kunabantu abathile abanaleli gunya. Sebelapha izinsuku ezingama-30 kanti ijimu ehhotela ivaliwe, ijimu eya esikhungweni ivaliwe bathi, wa wa wa, ngiyakhuluphala.
Uyangazi Ezemidlalo ziyingxenye yosuku lwami. Uyazi ngiletha izinsimbi zami nomaphi lapho ngiya khona. Uma ukhuluma ngokuba sendizeni, ungazuza amakhilogremu angama-60 endizeni amapayipi angama-dumbbells ambalwa, ulungile.
ukuzivocavoca umzimba okunesisindo
Shiya ezinye zalezo zingubo ngemuva. Ngisebenzisa ini? Vele ngizokwabelana, ake ngikubonise ukuthi kwenzekani lapha. Ngakho-ke, njengoba ubona, ngisebenzisa umqeqeshi we-Under The Desk elliptical.
Lona ngumqeqeshi we-Sunny Under The Desk elliptical. Uyabona, unezilinganiso ezahlukahlukene lapha ongabona ukuthi uzozihlanganisa yini ibanga, ama-calories nesikhathi osinaso bese kuba nezindlela zokumelana ezihlukile ozozihamba. Njengabathathu, abane, abahlanu.
Kulungile, ake ngikukhombise lapho ngigwedla. Kulungile uma nginyathela ngakho ngizizwa kuphi? emathangeni ami. Ngicabanga ukuthi lesi sihlanganisi sikhangiswe ngabakwa-Under The Desk ukusiza ngezinqe namathole akho, umzimba ophansi futhi ushisa ama-calories.
Ngakho-ke njengamanje ngihleli esihlalweni esinamasondo. Akukuhle kangako ngoba kuhamba kahle. Roll, roll, ngiphushe ngiye emuva naphambili.
Manje ngikutshela ukuthi lezi zinto zithatha ukujwayela. Ngoba lapho ngiqala ukuyithola bekuphazamisa kakhulu ngoba bekuzwakala sengathi ngiyazi ukuthi imilenze yami iyahamba, kepha manje yini, senginayo izinsuku ezimbalwa. Uma bengifuna ukuphendula konke ukuphawula kwakho, ngingavele ngithathe enye yezingcingo zami futhi uyazi, ngaphansi kwedeski. (Owesifazane uyamamatheka) Oo, kulungile, njengokwabelana, landela, landela, uthanda, uthanda ukwabelana.
Noma lapho kufanele ngihlole ama-imeyili ami futhi ngifuna ukukubonisa okunye mayelana nale nto engiyithanda uSpital nami ebusuku. (Woman crouched) Kwakungamakhilogremu angama-25 kuphela. Ngingayisebenzisa njenge-pounder yami engama-25 futhi ayidingi ukuhlanganiswa.
Manje enye into. Kuthiwani uma ngingayithandi, i-Amazon inenqubomgomo yokubuyisa yezinsuku ezingama-30. Thumela futhi.
Manje yini iphuzu lami? Iphuzu lami ukuthi akukho lutho lwenani olulula. Futhi izinto eziningi ezisibeka ezingeni esifuna ukufika kulo empilweni azikhululekile, kepha ngumbuzo wokuthi sizifuna kabi kangakanani? futhi kubaluleke kangakanani kithi? ukuzivocavoca umzimba kubaluleke kakhulu kimi futhi ngizothola ukuthi ngingazivocavoca kanjani noma kuphi ukuze uma kukhona ofuna ulwazi oluthe xaxa ngalokhu ngicela ungazise, ​​ngizothumela isixhumanisi emazwaneni, ngizokukhipha lokho okuncane bese ngipompa kancane ayina bese uphuma lapha uye esibhedlela. Kepha bengifuna ukwabelana ngomshini wami wokuzivocavoca we-Amazon ehhotela futhi ngithi nje asikho neze isizathu sokungazinakekeli kakhulu.
Empeleni awukwazi ukuma kuyo. Unento encane lapha bathi uma ume kuyo uyahlanya. Futhi ngeke sithweswe icala.
Futhi ungasiceli imali ngoba ngeke sikunikeze, lokho kusho ngokuyisisekelo. Ithi ukuzivocavoca okuyindilinga kuhloselwe indawo yokuhlala kuphela; ungami endaweni yokuzivocavoca eyisiyingi. Uma ungalandeli izixwayiso nemiyalo yethu, ungalimala kanzima.
Kukhona ezinye ongama kuzo. Ngoba angazi, ngicabanga ukuthi ngifuna ukukwazi ukusukuma lapho ngizizwa ngifisa ukuma ngihlale phansi lapho ngizizwa ngifisa ukuhlala. Futhi lena ingahlala kuphela, kulungile.
Ngokwethembeka, kungani ngiyale lokhu? Ngoba izofika lapha ngokushesha kunezinye. Futhi bengifuna ukuqala ukuziqeqesha zisuka. Iqiniso lelo.
Ngakho-ke uma umuntu olimele emisipha, ngiyabona ukuthi lokhu kuhle ngoba lokhu kufana nokwelashwa ngokomzimba. Kulungile, bafana, kufanele uhambe. Ngiyakuthanda, ukubukeka, uthando, ingcebo nempilo.
Iyiphi i-elliptical engcono noma ibhayisikili elingaphansi kwedeski?
Ngenkathi i-ngaphansi kwedeski ibhayisikiliidlula i-ngaphansi kwedeski ellipticalumshini ngokunikela ngezindlela eziningi zokusebenza umzimba wonke ngaphandle kwemilenze, iokweqandakwenza i-ibhayisikilieyodwakangconongokunikela ngezindlela eziningi zokusebenza imilenze. Ngefayela le-okweqanda, Ungakhomba imisipha eminingi ehlukene emilenzeni yakho.
Ingabe ukuzivocavoca nge-pedal kukufanele?
Ngenkathiukuvivinya umzimbangeke ikunikeze ukuzivocavoca ngamandla aphezulu, usengathola ukuzivocavoca umzimba ngamandla aphansi nangaphansi. Ukusebenza ngamandla amaphakathi kusasebenza kakhulu; zihlose okungenani imizuzu eyi-150 ngeviki ukuthola izinzuzo ezifanele, ngokusho kwe-American Heart Association.
imilenze esanda kushejwa
Ngabe unganciphisa isisindo nge-under desk treadmill?
Okwamanjeukuncipha komzimbaisikhathi esingaphezu konyaka sisebenzisa i-ideski lokunyathelayafundwa ephepheni le-2013. 2Bonakulandele izihloko ezingama-36 ezisebenzise i-aideski lokunyathelangokwesilinganiso sehora ngosuku,ukulahlekelwaisilinganiso sama-1.4 kilograms (3.1 amakhilogremu). Izifundo ezazikhuluphele zalahlekelwa kakhulu — isilinganiso samakhilogremu angu-3.4 (amakhilogremu ayi-7.5).
Ingabe ideski lokuhamba lihle?
Ucwaningo lwesayensi lubonisa ukuthi “umshini wokunyathelisaamatafula”Noma“amatafula okuhamba”Kukhonakuhle kakhuluindlela yokwandisa isilinganiso somsebenzi. Imiphumela ibigculisa kakhulu, ingasaphathwa eyokulindela kwami. Ngemuva kwezinyanga ze-2 zokusetshenziswa kwansuku zonke, bekuyisikhathi sokwenza ukuhlolwa kokuqala.15 kuJana. 2021 g.
Ingabe ngaphansi kwedeski ellipticals kuyasebenza ngempela?
Ababona Abakhulu Kunabo BonkeKuyaphumelelaIthuluzi Lokunciphisa Isisindo
Wenayenzathola okuthile kokusha kwekhalori ngenkathi usebenzisa i-i-underdesk elliptical, kepha kuyinombolo encane. Ngokwesilinganiso, abasebenzisi bazoshisa ama-calories ayi-150 ngehora - ukusha okuhamba kancane, kusho u-Alexander.UJan 29. 2021 g.
Ingabe ukuhambisa amatshe kuyasiza ekulahlekelweni ngamafutha esiswini?
Yebo,ukuhamba ngebhayisikili kungasiza ekulahlekelweni ngamafutha esiswini, kodwa kuzothatha isikhathi. Ucwaningo lwamuva lubonise njaloukuhamba ngebhayisikiliingahle ithuthukise konkeamafuthaukulahleka nokukhuthaza isisindo esinempilo. Kuukunciphisaisiyonkeisisuibhande, ukuvivinya umzimba ngokulingene, njengeukuhamba ngebhayisikili(kungaba ngaphakathi noma ngaphandle), kuyasebenza ukwehlisaisisindo samafutha.Febhuwari 2 2021
Yikuphi okungcono ngaphansi kwedeski elliptical noma ngaphansi kwedeski lebhayisikili?
Yize i-Under Desk Bike ithatha indawo ye-Under Desk Elliptical njengoba inikeza izindlela eziningi zokubandakanya umzimba wonke nemilenze, ngakolunye uhlangothi, i-elliptical inikela ngezindlela ezingaphezulu nezingcono zokusebenza imilenze. Ungakhomba imisipha emilenzeni eminingi nge-elliptical.
Yini okudingeka uyazi mayelana nedeski?
Mina, ngisebenza kanzima, neDeskCycle. • I-DeskCycle ikuvumela ukuthi unyakaze ngaphansi kwedeski lakho ngenkathi usebenza. • Othisha bayazisebenzisa ezikoleni ukuvimbela izingane ekuzuleni. • Sizamile futhi sathola ukuthi ilungele amanye amahhovisi abandayo.
Ingabe kukhona amaphedali amabhayisikili ngaphansi kwedeski labafundi?
Emasontweni ambalwa edlule sizwe ngothisha wesikole samabanga aphakathi owafaka izinyawo zamabhayisikili ngaphansi kwamatafula abafundi bakhe. Ukwengeza okulula kuguqule abafundi bakhe: Bebezolile futhi begxile ekilasini futhi benza kangcono emsebenzini wabo wekilasi. Kungenzeka yini ukuthi ukuhamba ngebhayisikili ngaphansi kwedeski kube yisixazululo esilula, esinethezekile, nesinempilo ebesikade sifunana naso?